သူပုန်ရေယာဉ်စုသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောရုပ်ရှင်ရုံများတွင်စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိစဉ်တွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Quantum Storage ကိုလက်ခံသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » စိန်ခေါ်မှုများအဝေးမှရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သူပုန်ရေယာဉ်စုမွေးစား Quantum သိုလှောင်
စိန်ခေါ်မှုများအဝေးမှရုပ်ရှင်ပွဲတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သူပုန်ရေယာဉ်စုမွေးစား Quantum သိုလှောင်
ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဗိုလ်မှူးရုပ်ရှင်ပွဲတော်စတူဒီယိုဘို့အချိန်နှင့်တပြေးညီဒစ်ဂျစ်တယ် Workflows ထောက်ပံ့
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား။ - ဇူလိုင်လ 22, 2019 - ကွမ်တမ် ကော်ပိုရေးရှင်း (OTCPK: QMCO) ယနေ့အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုတစ်တပ်ဖြန့်တော်မူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ ကွမ်တမ် StorNext တစ်အကြီးစားရုပ်ရှင်စီမံကိနျး၏တိကျခိုင်မာစွာဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဝန်ဆောင်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်။ အဆိုပါ ကွမ်တမ် Xcellis နှင့် QXS သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်သေးငယ်တဲ့ခြေရာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအနေဖြင့်လယ်ပြင်၌က high-resolution ကိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Real-time ဖြစ်စဉ်များကိုထောကျပံ့ဖို့သူပုန်ရေယာဉ်စု enabled ။ ဒါဟာအစသုံးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်တစ်စက္ကန့်ဗီဒီယိုဖိုင်၏ 150 ဘောင် rendering နဲ့ Real-time အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် supporting, တစ်ဦးကိုမိုဘိုင်းရေနံတူးစင်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ configured ခဲ့သည်။
Tweet ဖို့ကိုနှိပ်ပါ: အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စု high-profile ကိုရုပ်ရှင်စီမံကိနျးအတှကျဒစ်ဂျစ်တယ် Workflows ကိုင်တွယ်ရန် @QuantumCorp က high-performance ကိုသိုလှောင်မှုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော bit.ly/rebelfleet
တစ်ဗိုလ်မှူးရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီမံကိန်းများအတွက်သိုလှောင်ရေးစွမ်းဆောင်မှုနှင့် Mobility ကို
နယူးဇီလန်အခြေစိုက်, အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်-တည်နေရာအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်သမားတွေ, သိမ်းဆည်း, content တွေကိုဖြန့်ဝေနှင့်အခြားပိုမိုသောဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာအဓိက ဟောလိဝုဒ် စတူဒီယိုနယူးဇီလန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ set တိုက်ရိုက်အရေးယူရုပ်ရှင်စီမံကိနျးအတှကျနိယာမဓာတ်ပုံဘို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်, အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုထပ်ခိုးများနှင့် proxy ကိုဖန်တီးဒီဂျစ်တယ်တိပ်မှအကြောင်းအရာများမော်ကွန်း, ကနဦးအရောင်အဆင့်နှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပို့ချအပါအဝင်ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာန်ဆောင်မှုများ၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးအဆိုပြုထား post-ထုတ်လုပ်မှုပုံစံများနှင့်ဒါရိုက်တာနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများအားဖြင့်ချက်ချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဝဘ်မှကလစ်ပ်များကိုအပ်လုဒ်။ ဒီဖြေရှင်းချက်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဦးစလုံး၏ရှုထောင့်ကနေမိုဘိုင်း, ထို့ကြောင့်သိပ်သည်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
"အတိတ်ကာလ၌, ငါတို့သည်ငါတို့၏တူးစင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တိုက်ရိုက်-ပူးတွဲသိုလှောင်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း," မိုက်ကယ်မြို့ပြ, အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုမှာတည်ထောင်သူနှင့်မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။ "ဒါပေမယ့်အခုအသစ်ရုပ်ရှင်များအတွက်ဒီဂျစ်တယ် Workflows စီမံခန့်ခွဲရန်, high-resolution ကိုမီဒီယာများ၏စတင်ခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကိုထောကျပံ့ဖို့ကျနော်တို့ Higher-performance ကို shared သိုလှောင်မှုလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
factorial အကြံပြု ကွမ်တမ် StorNext
အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာများကိုအကဲဖြတ်ဖို့, အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုစက်ရုံတစ်လှည့် ကွမ်တမ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်ဒီဇိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူမိတ်ဖက်။
"ဒီသူပုန်ရေယာဉ်စုအဖွဲ့က၎င်းတို့၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များအတွက်လာမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကိုတက်ကြည့်ဖို့စတင်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကသူတို့ကြည့်ယူအကြံပြု ကွမ်တမ် သိုလှောင်မှုပမာဏ, "တိ Benson, စက်ရုံမှာဒါရိုက်တာနှင့်နည်းပညာဧဝံဂေလိဆရာကပြောပါတယ်။ အဲဒီအစားစွမ်းရည်သို့မဟုတ် bandwidth ကိုအာရုံစိုက်၏ "ကျနော်တို့လုပ်ငန်းအသွားအလာအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ထိုဆွေးနွေးမှု၏အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ်ဗဟိုပြု ကွမ်တမ် StorNext ပလက်ဖောင်း။ "
အဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုကိုရှေးခယျြ ကွမ်တမ် အတူ Xcellis လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှု ကွမ်တမ် အွန်လိုင်းနှင့် nearline သိုလှောင်မှုအတွက်စပ်သိုလှောင်မှုစနစ်များ QXS ။
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အချိန်နှင့်တပြေးညီအရောင်တန်းများနှင့်အစာရှောင်ခြင်း Rendering ဖွင့်မည်
အဆိုပါ StorNext ဖိုင်ပေါ်တွင်အခြေခံ high-performance ကိုသိုလှောင်မှုအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အရှိန်။ ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် run တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ colorist နှစ်ပေါင်းအကြီးစားစီမံကိန်းများကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး, သူသည်သူသည်ဤပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအောင်မြင်စွမ်းဆောင်ရည်ကြုံတွေ့တစ်ခါမျှ" မြို့ပြကပြောပါတယ်။
high-performance ကိုသိုလှောင်မှုလည်းအစာရှောင်ခြင်းက rendering enabled ။ "နှင့် ကွမ်တမ် ဖြေရှင်းချက်, ငါတို့သည်လည်း Real-time အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်ထောက်ပံ့စဉ်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများဖြင့်တစ်စက္ကန့်ဗီဒီယိုဖိုင်၏ 150 ဘောင်မှထွက် crank နိုင်ခဲ့ကြတယ် "မြို့ပြကပြောပါတယ်။ "ယေဘုယျအားဒီအွန်လိုင်းပတ်ဝန်းကျင် throughput ၏ဒုတိယနှုန်း6GB ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ဒါဟာအလွန်အထင်ကြီးခဲ့, ထိုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်းကျပ်စွာ turnaround ကြိမ်တွေ့ဆုံရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ StorNext ပလက်ဖောင်းပစ်ခတ်မှုအချိန်ဇယားကိုကြားဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲ, 200 ထံမှ 400 တီဘီရန်၎င်း၏အရွယ်အစားမှာနှစ်ဆ, ထည့်သွင်းသည့်အသံအတိုးအကျယ်စကေးမှစက်ရုံအဖွဲ့ enabled ။ ထုတ်လုပ်မှုအသင်းကိုသူတို့စီစဉ်ထားခဲ့သည်ထက်ပိုမိုပစ်ခတ်မှုစတင်ခဲ့သည့်အခါစက်ရုံနေဆဲပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ယခင်ကမျိုချမိပါဒေတာများကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မနက်ဖြန်အဘို့အ Flexible ယနေ့တွင်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရ,
System ကိုယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ဝေးလံခေါင်ဖျားထောက်မိုင်ကွာနေရာတည်နေရာ, နှင့်အပေါ်အထူးအရေးကြီးပါသည် ကွမ်တမ် စနစ်ကအဆိုပါသူပုန်ရေယာဉ်စုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်။ အတူအပြုသဘောအတွေ့အကြုံကို ကွမ်တမ် အဓိကစတူဒီယိုရုပ်ရှင်အပေါ်သိုလှောင်မှုအပိုဆောင်းဆည်းပူးဖို့သူပုန်ရေယာဉ်စုကိုဦးဆောင် ကွမ်တမ် စနစ်များကို။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး Workflows များအတွက်အခြား Xcellis စနစ်အားတပ်ဖြန့်နှင့်ကရှေ့ကိုမသွားအားလုံးက high-performance ကိုလိုအပ်ချက်များအတွက် StorNext နှင့် Xcellis အပေါ်စံခဲ့သည်။
"StorNext ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ဖို့လမ်းကိုပြောင်းလဲသွားပြီ," မြို့ပြကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်စွမ်းဆောင်ရည်ပေါင်းဖန်တီးမှု tools များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ StorNext နှင့်အတူကျနော်တို့လုံးဝ unconstrained ပါ။ "
StorNext အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ: www.quantum.com/stornext
Xcellis အကြောင်းပိုမိုများအတွက်: www.quantum.com/xcellis
ကွမ်တမ် နှင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထိုသို့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက် - နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖောက်သည်ကိုဖမ်းယူဖန်တီးမျှဝေဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကူညီပေးသည်။ ဒေတာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဇာတ်စင်အဘို့တည်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ, ကွမ်တမ်'' s ကိုပလက်ဖောင်းအမြန်ဆုံး high-resolution ဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်, ပုံများ, နှင့်စက်မှု IoT သည်။ ဒါကစမတ်အပေါ်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည်, အားကစား franchise, သုတေသီများ, အစိုးရအေဂျင်စီများ, လုပ်ငန်းများ, မိုဃ်းတိမ်ပံ့ပိုးပေးကမ္ဘာတွင်ပျော်ရွှင်လုပ်နေပါတယ်, ဘေးကင်းများနှင့်ဖွင့် ကွမ်တမ်။ ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုပါ www.quantum.com.
ကွမ်တမ်, အ ကွမ်တမ် လိုဂို, StorNext နှင့် Xcellis မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဖြစ်စေများမှာ ကွမ်တမ် Corporation နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံများ၌၎င်း၏ affiliates ။ အားလုံးသည်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
"ကို Safe ဆိပ်ကမ်း" ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်: ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် "ရှေ့ဆက်-looking" ထုတ်ပြန်ချက်များပါရှိသည်။ သမိုင်းအချက်ကိုထုတ်ပြန်ချက်များထက်အခြားအားလုံးထုတ်ပြန်ချက်များရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များယူဆနိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ အထူးသ, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အကျိုးကျေးဇူးများသက်ဆိုင်သောထုတ်ပြန်ချက်များ, အားသာချက်များ, ပန်းတိုင်, စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အသုံးပြုခြင်းမှဆင်းသက်လာတန်ဖိုးကို ကွမ်တမ်'s StorNext®, Xcellis နှင့် QXS သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ဟာကို Safe ဆိပ်ကမ်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုအတွင်းရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များမှမရရှိနိုင်ပါသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အခြေခံထားပါသည် ကွမ်တမ် ရက်စွဲ hereof ပေါ်မှာ။ ဤရွေ့ကားထုတ်ပြန်ချက်များလူသိများနှင့်အမည်မသိအန္တရာယ်များ, မသေချာမရေရာမှုများနှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည့်အခြားအချက်များပါဝင်ပတ်သက်နေ ကွမ်တမ်'' s ကိုကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မမျှော်လင့်ဘဲအပြောင်းအလဲများအပါအဝင်ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေကြေညာချက်အားဖြင့်ဆိုလိုသူများထံမှရုပ်ပစ္စည်းကွဲပြားဖို့အမှန်တကယ်ရလဒ်များကို။ ဤအအန္တရာယ်အချက်များနှင့်ထဲမှာထွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်အပိုဆောင်းအန္တရာယ်အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ကွမ်တမ်'' s ကိုကန့်သတ်ထားအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်မ Securities and Exchange Commission နှင့်အတူသည် Periodic FILE, ဆိုတဲ့အပိုင်းစာရင်းဝင်သောသူတို့ကိုအန္တရာယ်များနှင့်မသေချာမရေရာ "အန္တရာယ်အချက်များ," အတွက် ကွမ်တမ်'' s ကို Form ကို 10-မေးပေါ်လပတ်အစီရင်ခံစာခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီအခန်းမှာစာရင်းအထူးသဖြင့်သူတို့အားအန္တရာယ်များ, နိုဝင်ဘာလ 9, 2017 အပေါ် Securities and Exchange Commission နှင့်အတူတင်သွင်း "စစ်ဆင်ရေး၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုထုတ်ကုန်များ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကပေါ်နှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်မိတ်ဆက်အပေါ်မူတည်, ငါတို့စီးပွားရေး, ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေနှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ရလဒ်များကိုရုပ်ပစ္စည်းနှင့်ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေခြင်းငှါအရာအမှု၌, အောင်မြင်သောမည်မဟုတ်ပါ။ " ကွမ်တမ် ဖော်ပြသက်ဆိုင်သောဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည့်အဖြစ် မှလွဲ. ကို update သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်သည်၎င်း၏ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေထုတ်ပြန်ချက်များအသစ်အချက်အလက်များ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်စေ, အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုတာဝန် disclaims ။
အနီရောင်လော်ရီကုန်အဝါရောင်လော်ရီကုန် (ကွမ်တမ်'' s ကို PR စနစ်အေဂျင်စီ)
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-07-30
ယခင်: နယူး Dalet Brio SMPTE ST 2110 နှင့်အတူအိုင်ပီတစ်ခုအုကမ်းမဖက်မြပေး
နောက်တစ်ခု: AWS နှင့်အတူပြန်ဆိုနို့ Visual Effects '' Apocalyptic "ကောငျးအတိတ်နိမိတ်" သူ Work